नेपाली जनताका लागि खाना, नाना र छानासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक छ :प्रधानमन्त्री ओली « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
नेपाली जनताका लागि खाना, नाना र छानासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक छ :प्रधानमन्त्री ओली
न्यूयोर्क, ११ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताका लागि मानवतालाई पूर्णता दिने खाना, नाना र छानायुक्त प्रजातन्त्र आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
प्रश्न:यस पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
प्रश्न :महासभा महाधिवेशन बाहिर भेटघाटमा कस्ता अभिव्यक्ति आए ?
प्रश्न ः भोलिको महासभालाई सम्बोधन गर्दा के सन्देश दिन खोज्नुभएको छ ?
प्रश्न ः ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ आन्तरिक रूपमा अति आवश्यक छ तर विभाजित विश्वमा नेपालले कसरी सहयोग प्राप्त गर्ने ?
प्रश्न ः शान्ति स्थापनामा आएको रकम घट्दो छ । विरोध पनि छ नि ?
– हाल नेपाली नियोगमा कार्यवाहक प्रमुख सक्षम र अनुभवी हुनुहन्छ । धेरै हतार गर्नुपर्दैन । यस्तो कुरा कर्मकाण्ड होइन, काम चलाउन निकै अनुभवी समूह छ, हतारो गर्नुपर्ने अवस्था छैन । धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले विलम्ब भएको हो, अब छिट्टै राजदूतको चाँजोपाँजोको काम हुन्छ । (